यस्तो छ थाहा पाउनुहोस् भान्साको औषधि ज्वानो र यसको उपयोग
स्वास्थ्य हेल्थ टिप्स
भान्साको औषधि ज्वानो र यसको उपयोग
नोभेम्बर 10, 2018 साइन्स इन्फोटेक	3 Comments ज्वानो, डा. राम बहादुर बोहरा
हाम्रो भान्सामा यस्ता अनेकौं मानव स्वास्थ्यमा उपयोग हुन सक्ने खालका औषधि छन् जसको प्रयोगले थोरै मेहनतमा ठुल्ठूला रोग निको बनाउन सकिन्छ । आज मैले ज्वानोको विषयमा लेख्न गइरहेको छु । ज्वानो सुत्केरी अवस्थामा दिनाले आंग कस्नुको साथै दूध बढाउने कुरा अधिकांशलाई थाहा छ । तर ज्वानोबाट अन्य थुप्रै खालका रोग निको हुने कुरा थाहा नभएको हुन सक्छ ।
हामी यति धेरै परनिर्भरपनको शिकार भयौं कि हामीले राम्रो बस्तुको उपयोग गर्न जानेनौं यो दु:खद कुरा हो । कुनै पनि वस्तुको सहि उपयोग गर्न सके बहुमुल्य औषधि हाम्रो यत्रतत्र छरिएर रहेको विगत लामो समयदेखि भन्दै आएको छु ।
हामीले अंग्रेजी शिक्षा लिएका छौं यो शिक्षा खास गरी युवा पलायन गर्न उपयोग हुने देखिएको छ । तर हामीले तल्लो कलास देखि नै जडिबुटीको शिक्षा दिन सकेको खण्डमा मानिस निरोगी हुने पक्का छ । यस्तो कार्यमा कसैको ध्यान नपुग्नु दु:खको कुरा हो ।
आज मैले जनताको ज्ञान बढाउन र भान्साको औषधि प्रयोग गर्न ज्वानोबाट उपचार गर्नेबारे प्रकाश पार्न गई रहेको छु । ज्वानो हाम्रो नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने बस्तु हो तर यो पनि छिमेकीले पुराएको छ भन्ने सुनेको छु ।
१. अमिलो पानी आएमा
ज्वानोलाई पाउडर बनाउने र मनतातो पानीमा थोरै बिरेनुन राखेर खानापछी आधा चमच १०/१५ दिन खानाले यो रोग निको हुन्छ ।
ज्वानो गरम पानी सित खानाले शरीर तातो भएर योगमा कफ पग्लनाले राम्रो फाइदा हुन्छ ।
३. पेट दुख्ने भएमा
ज्वानो र थोरै सिधेनुन गरम पानीसंग खानाले पेट दुख्न निको हुन्छ ।
४. जोर्नी दुख्ने रोगमा
ज्वानोको तेलले मालीस गर्नाले निको हुन्छ ।
५. वायरल सक्रमणमा
गरम पानीमा ज्वानोलाई उमाल्ने र दालचिनि मिस्रण गरेर ३ पटक खान दिने निको हुन्छ ।
६. रक्सी छोड्न मन भएमा
ज्वानो दैनिक मुखमा राखेर चपाउनाले रक्सिको लत छोडाउन सक्छ । खाने मनलाई हटाउन यसको ठूलो भूमिका छ ।
जिरा र यसको प्रयोग
बेसार र यसको प्रयोग
फिटकिरी र यसको प्रयोग
← भाई तिहार
रक्सीको लत छोड्न ज्वानो →
चक्कर किन लाग्छ ?
अक्टोबर 12, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0
3 thoughts on “भान्साको औषधि ज्वानो र यसको उपयोग”
Pingback:रक्सीको लत छोड्न ज्वानो
Pingback:ग्यास्ट्रिकको औषधि ज्वानो